“Kulli Fitnah Cinda Kursi”
Ninkii raba inuu guri dhiso geelu wuxuu u ahaa lama huraan dhaqanka Soomaaliyeed. Mid uu gabadha ka baxsho iyo miduu dhaqdo.
Dibaatooyinkii la isu gaysan jiray badankooda geelaa sababi jiray. Mar la kala dhaco, mar daaqsiintiisa la isku qabsato iyo mar waraabintiisa lagu dagaalo.
Meeshii Geele hada waxaa noo galay “kursi”. Qabiil kasta iyo qabqable kasta wuxuu rabaa inuu kursiga iyagu ama qabqablahoodu ku fariisto. Muqdisho kaligeed shan kursi doon ama ka badan ayaa ka jira.
Geela dhaqashadiisu waa mubaax hadii dariiqo xalaal ah lagu tacbo halka kursi doonidu ayna mubaax ahayn hadaadan adigu ahayn “mar soo bax”.
Qofkastoo geel leh, geel-jire lama dhaho laakiin badanaa dadka geela leh waa geel-jirayaal. Axaadiis baa cadaysay in qofka geel-jiraha ahi uu yahay qof qalbi adag oo kibir badan (sida badan). Dhaqanka Soomaaliyeedna arintaasi waa ku cadahay.
Hadaad rabtid inaad noqotid kursi-jire ama kursi-jiriye waxaa loo baahanyahay in sifooyinkaas geel-jirenimadaa la iska dhaqo maxaa yeelay kursi-jirehu wuxuu raacaa dad halka geel-jirehu uu duunyo raaco. Hadii geel-jire yiraahdo kursi-jire baan noqonayaa waxay la mid tahay qof kawaanle ah oo ariga qala oo inta isbitaal yimaada leh waxaan noqonayaa “surgeon” dhaqtarka dadka qala.
Kursi-jireha waxaa la rabaa inuusan noqon qof qalbi adag oo dabeecad xun. Waatii uu Ilaahay Nabi Muxamad (SCW) uu ku lahaa naxariista Eebe darteed ayaad ugu jilicsanaatay laakiin hadaad tahay mid engagan/qalalan oo qalbi adag waa kaa kala tagilahaayeen. Kursi-jirayaal sax qofkii raba dadkaan isha hamariyo:
Nabi Muxamed (Salalaahu Calayhi Wasalam).
Abuu Bakar(Raadhiyalaahu Canhu).
Cumar Binu Khidhaab(Raadhiyalaahu Canhu).
Cismaan Binu Cafaan(Raadhiyalaahu Canhu).
Cali Binu Abii Dhaalib(Raadhiyalaahu Canhu).
Geel-jirenimadu doorasho uma baahna laakiin Kursi-jireha yaa doorta?
Horta kursi-jireha waxaa jira shuruudo lagu doorto oo waa inuu yahay qof ceeb ka saliim ah waxaana laga qoray kitaabo badan.
Waxaa lagu doortaa shuuro dadka doortana waa dad la yiraahdo “Ahlul Xali Walcaqdi”. Waa dadka waxgaradka ah ee arintu ka go’do.
Kursi-jireha Soomaaliya waxaa lagu wadaa inay soo doortaan qolo aan anigu ugu yeero “Ahlul Kufri Walxiqdi Walcunfi” marka Jabuuti laga reebo iyagana kooxa siyaasada intooda badani waa ka soo horjeedaan.
Malaga yaabaa in kursi-wade fiicani halkaas ka soo baxo?!
Hayhaata. Waxaan ka jeclaan lahaa inta sidii caadada ahayd geed hoosti fariistaan inay geel-jire noosoo doortaan mar hadaan kursi-wade fiican wadadiisii la marayn.